०७८ कार्तिक १० गते बुधबार, यस्तो छ तपाईको राशि अनुसारको भाग्यफल! – PathivaraOnline
Home > राशिफल > ०७८ कार्तिक १० गते बुधबार, यस्तो छ तपाईको राशि अनुसारको भाग्यफल!
admin October 26, 2021 राशिफल 0
स्वास्थ्य सबल रहनेछ । काममा पनि फाइदाको योग छ । व्यापारमा भने कम मात्र फाइदा होला । भविष्यका लागि विशेष काममा जग बसाउने मौका छ । व्यापारमा प्रशस्त फाइदा हुनेछ । विभिन्न सहयोग र उपहार पाइनेछ । आयआर्जन पनि राम्रै हुनेछ । अतिथिका रूपमा सम्मान प्राप्त हुन सक्छ ।
पशुपालन तथा कृषि क्षेत्रबाट राम्रो लाभ मिल्ने योग छ, तर पनि नसोचेको रोगले भने सताउने देखिन्छ । अरूका काममा समय बित्न सक्छ । उपलब्धि प्राप्त गर्न निकै मिहिनेत गर्नुपर्नेछ । काम पूरा नहुनाले मन खिन्न रहनेछ । अनावश्यक भ्रमणमा समय बित्न सक्छ । उपचारमा खर्च हुने योग छ ।
रमाइलो यात्रा हुने सम्भावना छ । मेहनतले जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सकिनेछ । आम्दानी बढ्नेछ । परिवारजनका आवश्यकता पूरा हुनेछन् । दिगो फाइदाका लागि लगानी बढाउन सकिनेछ । प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ । व्यापार लगायत आर्थिक लाभ हुने काममा राम्रै फाइदा हुनेछ ।
भूमि, वाहन र पैत्रिक सम्पत्तिबाट लाभ मिल्नेछ । व्यापारमा पनि प्रशस्त फाइदा हुनेछ । कीर्तिमानी काम गर्ने समय छ । आफ्नै कमजोरीले विवादमा परिनेछ भने सद्विचारले अभिप्रेरित हुनेहरूलाई फाइदा हुनेछ । व्यावसायिक काम सम्पादन हुनेछन् । सवारी साधन उपयोग गर्दा सावधानी अपनाउनु होला ।
श्रमको उचित मूल्यांकन होला । पढाइमा प्रगति हुनेछ । नयाँ ज्ञान प्राप्त हुने योग छ । लाभ हुने काम प्रारम्भ गर्ने समय छ । गरिएका कामको राम्रै मूल्यांकन हुनेछ । भौतिक साधन समेत जुट्नाले प्रसन्नता मिल्नेछ । रमाइलो यात्रा गर्ने अवसर जुट्नेछ । कामको चापबाट पनि फुर्सद पाइनेछ ।
मेहनतले आम्दानी बढाउनेछ । आयस्रोत बढ्ने र उठ्नु पर्ने रकम हात लागी हुने समय छ । साझेदारीमा राम्रो फाइदा हुनेछ । व्यापारमा पनि बढी नै फाइदा हुने समय छ । परिवारजनको साथले नयाँ आशा पलाउनेछ । प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनेछ भने दाम्पत्य सुखमय बन्नेछ ।
कुन बार कुन देवताको ब्रत बस्ने? यसरी राख्नुस बारअनुसार भगवानको ब्रत!
कस्तो रहला यहाँको शुक्रबारको भाग्य? भदौ २५ गतेको राशिफल हेर्नुहोस्
वि.सं. २०७५ मंसिर ०६ तथा नोभेम्बर २२ तारिख बिहीबारकाे राशिफल हेर्नुहाेस